ဘလော့လောက မှာ မသာယာပါဘူး ပြောရင်း
ဖက်တွယ်နေမိတဲ့ ... ဘလော့ သရဲ တကောင် ဖြစ်လာ တာပေါ့ကွယ်...။
ဘလော့ မှာ ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့ စိတ် နဲ့ စားစားသွားသွား ဗျာများနေတဲ့ ဘလော့ဂါ ရေ...
အရက်သောက်ရင်တောင် ဘလော့နားမှာ နေပီးသောက် တဲ့ သူဆိုတော့....
ဘလော့ချစ်သူ လို့ပဲ ကင်ပွန်းတပ်လိုက်ပါလား ဟင်
Jul 31, 2008, 10:45:00 PM
ကျနော်ကတော့ ဘာချက်ချက်စားမယ် အစပ်ဟပ် တည့်တည့် မတည့်တည့် စားသူရဲ့ လျှာပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ် အခုလည်းစားမယ် နောင်လည်းစားမယ် အစ်ကို ချက်နေသ၍။ဘလော့ဂ် မရေးရတော့ဘူး ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတခုခုကို ဖဲ့ချွေခံရသလို ခံစားချက်က ဖြစ်လာတယ်။ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ပဲ လက်ခံတယ်။ အားပေးနေတဲ့ သူတွေရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ အသ်ိနဲ့ဘလော့ရေးပါလို့;)
အစ်ကိုကတော့အရေးအသားနဲ့အတွေးအခေါ်မှာ တော့ တကယ့်စာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ပါ... ကျွန်တော်ကတော့ အပြင်ရောက်မှ Blog ဆိုတာရင်းနှီးခွင့်ရတာ.. သူများတွေရေးထားတာတွေ နဲ့ကိုယ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ website address တွေမှတ်ဖို့လုပ်ရင်းကပိုးဝင်သွားတာ
အခုတော့ နှစ်လဆိုတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ.. ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားရအုံးမယ်..
Jul 31, 2008, 11:13:00 PM
ပထမဆုံး အပိုဒ်မှာတင်တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဗျာ။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဘလော့ရေးတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အများစုကို ရေးထားတာဖတ်ရတော့လည်း ကြည်နူးမိတယ်။
Aug 1, 2008, 1:38:00 AM
ဘာမှ သိပ်မတွေးပါနဲ့လေ။း)
အသွေးအသားထဲက.. စာရေးချင်လို့ကို ရေးနေတဲ့..ဘလော့ တွေ မှန်း သိပါတယ်။ ရေးချင် တော့ ရေး- မရေးချင်တော့ ရင်.မရေးနဲ့ပေါ့။ ဒါပဲ- ဘလော့..လေ။
Aug 1, 2008, 3:01:00 AM
Aug 1, 2008, 3:42:00 AM
ရေးပါ။ ရေးပါ။ စိတ်ချမ်းသာသရွေ့ရေးပါ။ တခါတလေ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံး အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် စွန့်လွှတ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးချင်သလောက်တော့ ရေးကြတာပေါ့။
Aug 1, 2008, 6:56:00 AM
တစ်ချို့က ပျော်လို့ ဘလောဂ့်တယ်
တစ်ချို့က ၀ါသနာကြောင့် ဘလောဂ့်တယ်
တစ်ချို့ကျတော့ ဘလောဂ့်ရင်း ခံစားချက်တွေ ပွင့်ထွက်တယ်
တစ်ချို့ကာ ဘလောဂ့်က တစ်ဆင့် ကလောင်သွေးတယ်
တစ်ချို့က မျှဝေခြင်းနဲ့ ဘလောဂ့်လုပ်တယ်
တစ်ချို့ကျတော့ ဘလောဂ့်ရင်းနဲ့ မိတ်သစ်ရှာလို့
တစ်ချို့ကျတော့ ဘလောဂ့်ရင်း ဝေဖန်တယ်
တစ်ချို့ကြောင့် ဘလောဂ့်ရင်း ရင်မောရတယ်
တစ်ချို့တွေဆို ဘလောဂ့်ရင်း အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လို့...
အဖြစ်သနစ်စုံမှ လောကဖြစ်သလို ဘလောဂ့်စနစ်စုံမှ ဘလောဂ့်လောကလည်း ပျင်းစရာ မကောင်းတော့ဘူးပေါ့.. :P
Obviously you have regular readers now as they enjoy reading your posts and giving their times here including me.
Every single time i came here and read your posts, I feel it's worth it to spend the times in your blog because purely you have talents.
Whatsoever the reason that you do the blog, I am pretty sure peoples are enjoy visiting here. So, Keep on rolling what you believe in. More importantly, I have faith in you the fact that you will not let peoples down who support you.
You are one of the best favorite blogger in Myanmar bloggers world for me. No doubt!!
Aug 1, 2008, 7:29:00 PM
ဟင်းချက်တာရမ်းသမ်းကွတ်ပေမဲ့ ဘလော့ရေးတာကတော့ ရမ်းသမ်းရေးတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည် ထက် ဟိုဘက်ကို ပိုရောက်နေတာပဲ ။ ကိုစေးထူးကြီးရေ ဆက်လုပ် ပါဗျ
Aug 1, 2008, 10:48:00 PM
yes ... but i dont want to glance back mine ... as i believe all good except some mis understandings .... cheers !
(PS. I cant type Burmese now for my comp problem ...)
Aug 1, 2008, 11:20:00 PM
ဘလော့စရေးကစလို့ ခံစားချက်တွေ မလတ်ဆတ်တော့တာ တော့အမှန်ပဲ။
Aug 2, 2008, 12:47:00 AM
Blog မရေးခင်က ကိုစေးထူးတို့ မမေဓာဝီတို့ blog တွေ အရင်ဆုံး စဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာအရေးအသားရော အတွေးအခေါ်တွေရော ကြိုက်လို့ comment မရေးခဲ့ပေမယ့် အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ကိုစေးထူးပို့စ်တွေ တခြား media (ခေတ်ပြိုင် ၊ ဧရာဝတီ၊... ) မှာ ဖတ်ရတော့ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ကျနော်တို့နဲ့ အစပ်အဟပ်တည့်တယ်ဆိုရမလားပဲ.. နောက်ပြီး အကိုတို့လို စာရေးကောင်းတဲ့သူတွေဆီက ပို့စ်တခုဖတ်ရရင် ဗဟုသုတ အတွေးအဲဒီလိုလေးတွေ ပေးတတ်တာကို သဘောကျတာ။ တကယ်လို့သာ စာရေးကောင်းသူတွေ နားသွားရင်တော့ အားလုံးအတွက် အများကြီးနစ်နာတယ်လို့ ထင်တယ်..။ ပို့စ်အသစ်တွေ ရေးနေသရွေ့တော့ အားပေးနေဦးမှာ....
Aug 2, 2008, 2:11:00 AM
Aug 2, 2008, 3:38:00 AM
One Star said...
Aug 2, 2008, 6:49:00 AM
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘလောက်ရေး ရတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲ ကိုယ်ရေးတာကို ကိုယ်တာဝန်ယူရဲတဲ့ အသိတော့ ရှိရတာ ပေါ့လေ။ ပုံရိပ်တော့ ဘလောက်ကို ဖြည်းဖြည်း နှေးနှေးနဲ့ ဆက်ရေးဖြစ်နေ မယ်ထင်တယ်။ :D ကိုစေးထူး လည်းဆက်ရေးပါ။ အားပေးနေပါတယ်။
အဟိ အပေါ်ကပြောသွားကြတာတွေအားလုံးအတိုင်းပဲ ကိုကြီးစေးထူး ချီးယားစ် 555
I put my heart and soul to read your every blog post either keeping quiet or not :P
ဘလော့ဆိုတာ မျက်လှည့်မဟုတ်ပေမယ့် စကားလုံးတွေကတဆင့် ငိုရ… ရယ်ရ… ပျော်ရွှင်ရ… စိတ်တိုရ… ကြေကွဲရ… နဲ့ဘလော့ရေးသူ လက်စွမ်းပေါ်မူတည်လို့ခံစားချက်တွေ အမျိုးမျိုးပြောင်း အံ့သြစရာလဲ ကောင်းပါဘိ…
ကျွန်မ မဘလော့ခင်ထဲက ဒီဘလော့ကို သံယောဇဉ်ကြီးစွာနဲ့အမြဲရောက်နေကျ…
ဒီဘလော့ကနေအင်အားတွေရတယ်… ယုံကြည်ချက်တွေရတယ်… စေတနာတွေရတယ်…
ကိုစေးထူးရေ… ၂နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ဘလော့နိုင်ပါစေလို့ …
Aug 4, 2008, 2:08:00 AM
Khun Kham Don said...
Aug 4, 2008, 11:06:00 PM
ဒီ post ထဲက ခံယူချက်ကော အရေးအသားကော ကဗျာကော အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ။
Aug 5, 2008, 12:36:00 AM
ဟိုးရှေ့မှာ ပန်းတိုင်ရှိတယ် ဆိုပြီး ...
ပန်းတိုင်ဆီ အတူပျံသန်းရင်း ...
ကျန်နေခဲ့တဲ့ ငှက်ငယ်တကောင် ...
သူ ... အတောင် ညောင်းသွားလို့လား ...
သူ ... အတောင် ကျိုးသွားလို့လား ...
ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတခု ဖဲ့ချွေခံလိုက်ရလို့လေလား ....
ပန်းတိုင်သို့ ဆက်လက် ပျံသန်းနိုင်ပါစေ ...
Aug 5, 2008, 4:18:00 AM
ဘလော့က လမ်းကလေး ဆိုပါတော့။ ဆက်လျှောက်ရဦးမှာပဲ မဟုတ်လား။ လမ်းကလေးကလည်း တသမတ်ထဲ ပုံစံတူရှိမနေဘူး။ မြက်တွေစိမ်းလိုက် ခြောက်သွေ့လိုက်။ ဆောင်းဆိုတမျိုး နွေဆိုတဖုံ ရာသီအလိုက် အချိန်အလိုက် သဘာဝအတိုင်း ပြောင်းလဲနေတတ်ပြန်ရော။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်တော့လည်း သမင်လည်ပြန် ခံစားမှုတွေက တစ်ပတ်လည်လည် လာတတ်ပြန်တယ်။
Aug 5, 2008, 7:59:00 AM
တိတိ ကျကျ မှန်မှန် ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဘလော့ဂ် သူတိုင်း ဆီ နှင့် ရေ ၏ အနှစ်သာရ ကို ခွဲ ခြားတတ်မှာပါ…
(သူတို့ လာခဲ့ကြပါပြီ နဲ့ သမင်လည်ပြန် ပို့ စ်ဖတ်အပြီး မှာ တိတိကျကျ ဆိုတဲ့ သူရို့ စကားလုံး ကိုပဲ ငှားသုံးလိုက်ပါတယ်… :D)
Aug 5, 2008, 8:23:00 AM
from SG said...
Hi Ko Klosayhtoo, Your blog is one of my favorite Burmese bloggers's blogs. Please keep writing. Your are suchatalented and great writer. Please keep up the good work. Wish you all the best. From SG
Aug 5, 2008, 10:14:00 PM
ခံစားချက်တွေကို နားလည်စာနာပေးကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေအတွက် တကယ်ကိုပဲ အားတက် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ အားလုံး အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Aug 5, 2008, 11:20:00 PM
Hi Ko Klosayhtoo, this is 1st time visiting to your blog, for me and I enjoy it.
One page, I meant one page only, I read from your blog and I felt that it's worth to come back to read for more than countless time.
Unlike some, you didn't point your fingers to anyone but pointed out to pure anlysis on situations of our country.
With additional facts, no matters with what reasons your writing blog, I will support u peacefully and sliently.
Then again gd luck with your thoughts and your blog.
Aug 6, 2008, 3:38:00 PM
နောက်ကျတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ အစ်ကိုရေ။ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး နှလုံးသားချင်း တူတာကတော့ အသေအချာပါပဲ အစ်ကိုရေ။ :)
Aug 6, 2008, 4:18:00 PM